Xaflad lagu taageeraya Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed oo lagu qabtay Mareykanka. – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Xaflad lagu taageeraya Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed oo lagu qabtay Mareykanka.
USA (SONNA)-Xaflad ballaaran oo lagu taagaaareyey Ciidaanka Xoogga dalka Soomaaliya oo ka soo qayb-galleen Danjiraha Soomaaliya u fadhiya xarunta QM ee Magaalada New York Amb.Abukar Dahir Osman Abukar baalle,Duuliye sare Asli hassan Cabaade oo ka tirsan guddiga taakulaynta Cidamada Xoogga dalka iyo Bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa lagu qabtay Magaalada Nashville dalka maraykanka.
Xafladda ayaa waxaa soo qaban -qaabiyey dhallinyaradda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Gobolka Tennessee,iyagoo aysan jaaliyadda Soomaliyeed u kala harrin, waxayna dadkii goobta ku sugnaa ay hal mar u sare kaceen heesta calanka Soomaaliyeed madaama lagu guddo jiro bishii Julay.
Abdifitah Ismail Abdullahi Guddoomiyaha hay’adda Midnimadda Ummadda Soomaaliyeed, isla markaasna ahaa Guddoomiyaha guddiga qaban qaabadda xafladda ayaa ugu horeyn u mahad celiyey dhammaan dadkii ka soo qayb-gallay, wuxuuna si gaar ugu mahad celiyey marti sharaftii soo ajiibtay madasha.
Marwo Asli Hassan Cabaade oo ka tirsan guddiga taakulaynta ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ayaa Bulshada Soomaaliyeed ugu baaqday in la garab istaago Ciidankeena, waxayna ka codsatay qurba joogta Soomaaliyeed inay Mushaarka Ciidanka XDS ka qeyb-qaataan.
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya xarunta QM ee Magaalada New York Amb.Abukar Dahir Osman Abukar baalle ayaa fariin u diray bulshada Soomaaliyeed,isaga oo ka codsaday dadka soomaaliyeed Mucaarad iyo Muxaafidba in ay ku da’daalaan Midnimada Ummmadda Soomaaliyeed, kana dheeraadaan wax kasta oo cadowga farxad galin kara.